Ny torolàlana farany ho an'ny horonan-tsary manazava (miaraka amin'ny ohatra) | Martech Zone
Talata, Jona 3, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mety efa nahita tranokala marobe mampiasa horonan-tsary mihetsika amin'ny pejin-dry zareo. Tsy maninona raha omenao azy ireo ny video manazava na horonan-tsary; samy manana ny tanjony avokoa izy rehetra: manazava ny vokatra na serivisy amin'ny fomba mora sy haingana, izay mahatonga azy ireo ho fitaovana marketing lehibe ho an'ny orinasa rehetra.
Fa maninona no misy karazana horonan-tsary manazava? Ny fomba tsirairay dia manintona karazana mpihaino hafa ary hisy fiantraikany amin'ny tetibolan'ny famokarana horonantsary ihany koa. Raha te hisarika ny sain'ny mpihaino anao ary hanomboka hiova fo dia tokony hahalala azy tsirairay ianao fomba an'ny Video Explainer. Ny fanontaniana dia:
Inona no fomba tsara indrindra amin'ny horonan-tsary manazava animated ho an'ny tranonkalanao?
Nanangona ny lisitr'ireo fomba malaza indrindra amin'ny horonan-tsary momba ny varotra animated izahay, miaraka amin'ny tolo-kevitray manokana ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
Ity dia fakana sary an-tsary na horonan-tsary tsotra mampiseho ny fomba fampiasana programa, tranokala na rindrambaiko. Ny horonan-tsary Screencast no karazana vidéo ambany indrindra nefa ilaina ihany. Ireo horonan-tsary ireo dia miresaka bebe kokoa amin'ny fanabeazana noho ny marika. Horonantsary lava kokoa izy ireo (mihoatra ny 5 minitra), ary miasa tsara ho an'ireo vinavina maniry hijery ny fomba fiasan'ny vokatra alohan'ny handraisany andraikitra.
Sariitatra Style na horonan-tsary mihetsika toetra
Ity dia iray amin'ireo karazana horonan-tsary manazava animated malaza eny an-tsena. Ny tantara dia tarihin'ny toetra amam-panahy, izay atolotra olana lehibe izay tsy voavahany. Izany no hisehoan'ny vokatrao na serivisinao… mitahiry ny andro!
Ny toetra dia mazàna maneho ny marika persona anao (mpihaino kendrena), noho izany dia zava-dehibe ny fananana toetra amam-panao famolavolana izay mifandray amin'izy ireo, manome ny maha-olona ny marikao amin'ny alàlan'ny fanomezana azy fihetsem-po sy toetra. Ireo karazana horonan-tsary ireo dia misy valiny lehibe satria misarika ny sain'ny mpijery haingana izy ireo ary tena mahafinaritra ny mijery azy.
Ity teknika fironana sy milay ity dia noforonin'ny mpanao sary iray tamin'ny voalohany izay nitaona teo amin'ny solaitrabe rehefa noraketin'ny fakan-tsary. Taty aoriana dia nivoatra ity teknika ity ary noforonina nomerika izao. Tamin'ny 2007, UPS dia naneho ny dokambarotra Whiteboard, ary ny taona 2010 ny Royal Society of Arts dia namorona sary mihetsika fotsy tamin'ny lahateny voafantina, nahatonga ny fantsona Youtube an'ny RSA ho fantsona tsy mitady tombony # 1 manerantany.
Whiteboard Animations dia teknika tena mahasarika, satria izy io dia manana fomba fanabeazana, izay amoronana eo imason'ny mpijery ny atiny.
Ny sary mihetsika dia zava-dehibe indrindra amin'ny singa mihetsika izay mampiasa ny herin'ny loko sy ny endrika hampitana hafatra saro-takarina izay tsy ho azo nampitaina raha tsy izany. Ireo horonan-tsary ireo dia manolotra fomba mahasarika ho an'ireo orinasa manana mombamomba azy matotra kokoa ary fomba iray lehibe hanazavana ireo hevitra tsy azo tononina.
Ireo horonan-tsary manazava ireo dia misy akony manokana amin'ny ezaky ny fifandraisana B2B.
Motion Graphics misy singa 3D
Ny sary mihetsika Motion Graphics miaraka amina fampidirana singa 3D dia manome endrika kanto sy be pitsiny kokoa. Izy ireo dia mety amin'ny fampisehoana ny orinasanao hisongadina eo ambonin'ny fifaninanana.
Motion Graphics no safidy mety indrindra ho an'ireo orinasa sy vokatra mifandraika amin'ny teknolojia vaovao, serivisy nomerika, fampiharana na rindrambaiko.
Cartoon Style miaraka amin'ny Motion Graphics
Ny horonantsary Cartoon Style Explainer miaraka amin'ny Motion Graphics dia iray amin'ireo karazana horonan-tsary mihetsiketsika malaza indrindra any, ary, raha tsorina, dia mampifangaro teknika miaraka izy ireo. Ny tarehin-tsarimihetsika dia mitarika ny tantara ary manome fomba fiasa akaiky amin'ny mpihaino, raha ny fampiasana sary mihetsika sary mihetsika kosa dia ampiasaina hanazavana ny hevitra sarotra.
Amin'ity fomba ity dia mahazo ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa isika - ny lafiny sariaka sy ny sarinteny mampihomehy amin'ny sary mihetsika sariitatra sy ny herin'ny fanaovana sary mihetsika ny teknikan'ny sary mihetsika.
Manoro hevitra azy izahay amin'ny fifandraisana B2C, saingy afaka miasa tsara amin'ny orinasa kely sy ny fanombohana koa izy ireo.
Horonan-tsary mihetsika mihetsika na horonantsary mihetsika
Ny horonan-tsary manazava mihetsika dia iray amin'ireo teknika tranainy indrindra satria tsy miankina amin'ny teknolojia nomerika avo lenta! Ireo dia horonan-tsary vita tanana - vita amin'ny frame tsirairay.
Ity sary mihetsika ity dia novokarina tamin'ny alàlan'ny firaketana ny sary tsirairay, na ny sary mbola avy eo ary ny fitendrena ireo sary voarakitra miverina nifandimby, ary maharitra ela kokoa ny famokarana. Hafa tanteraka ny valiny ary tena mahavariana. Stop motion dia teknika tsara tarehy rehefa vita tsara, mety ho lafo ihany koa izy ireo.
Manoro hevitra an'ity karazana horonantsary ity izahay raha te hampiasa fomba fiasa ara-pihetseham-po amin'ny mpihaino anao.
Lahatsary Animated 3D
A horonan-tsary 3D matihanina matihanina mety ho tena mahavariana, satria tsy misy fetra ny zavatra vitan'ny horonantsary 3D. Na izany aza, ity safidy ity dia iray amin'ireo lafo indrindra, noho izany dia tsy safidy ho an'ny fanombohana miaraka amin'ny tetibola voafetra izy ireo.
Raha tena mieritreritra ny hanao horonantsary mihetsika 3D ianao ary zakanao izany dia tokony hanao ny entimodinao aloha ianao ary hikaroka orinasa efa za-draharaha. Ny horonan-tsary mihetsika 3D ambany tetibola ambany dia mety hitondra valiny ratsy.
Ankehitriny dia manana topimaso tsara momba ny karazana horonan-tsary manazava mihetsika mifanaraka amin'ny pejy fandraisana anao ianao, ary izay hahasarika ny sain'ny mpihaino anao. Te hanana bebe kokoa? Sintomy ny ebook Yum Yum Video maimaim-poana - The Ultimate Guide to Explainer Videos!
Fampahalalana: nanampy i Yum Yum nametraka ity lahatsoratra ity ho an'ny Martech Zone mpamaky ary niara-niasa tamin'izy ireo mivantana tamin'ny tetikasa vitsivitsy izahay!
Tags: Lahatsary mihetsika 3dSarimiaina 3dLahatsary 3danimé videosary mihetsika sariitatrahoronan-tsary mihetsika toetrasary mihetsika tanimangatanimangahoronantsary mpanazavahoronantsary manazavasarimihetsika saryhoronantsary sary mihetsikahoronantsary screencastfijanonana-mihetsikahoronantsary sary mihetsika fotsyhoronantsary mpanazava fotsy
Media sosialy ho an'ny Unsexy B2B Industries
Sep 21, 2014 ao amin'ny 6: PM PM
Izaho dia eo amin'ny sehatry ny fanompoana ireo karazana zavatra ireo ka tsara sy voafaritra tsara amin'ny ohatra tsara.
Misaotra betsaka tamin'ity lahatsoratra sy horonan-tsary fampahalalana ity.
May 14, 2015 ao amin'ny 6: 16 PM
Isaky ny manontany ny mpanjifa aho hoe karazana video manazava inona no ataoko dia manana an'ity torolàlana mora aseho azy ireo ity aho. Misaotra Douglas nametraka ity toro-lalana ity. Misy ihany ve ianareo lehilahy afaka manasongadina ny orinasako amin'ny bilaoginao? Napetrako tao amin'ny faritra misy ny hevitro ny mailako